Nyore Kureverera: YeMahara Advocacy Chishandiso cheSocial Media | Martech Zone
Nyore Kureverera: YeMahara Advocacy Chishandiso cheMagariro Midhiya
Chitatu, Kukadzi 19, 2020 Chitatu, Kukadzi 19, 2020 Douglas Karr
Nyaya isina kumbondisiya ndeiyi shamwari Maka Schaefer dzakagovaniswa makore apfuura pakutaura pamusangano. Akakurukura nezvechiratidzo chepasi rose chaive nemazana ezviuru zvevashandi. Chikwata chavo chemagariro chinogadzira runyararo rwemagariro enhau… zvekuti hapana aipindura kana kugovana. Mako akabvunza kuti ndeipi mhando yekuita iyo iyo kambani yakaita apo vashandi vechiratidzo vacho vasina kuita kana kugovana zvirimo zvaigadzirwa nekambani?
Ehezve, kune vamwe vashandi vanoisa hupenyu hwavo hwega hwakaparadzaniswa nehukama hwavo hwemagariro. Nekudaro, panogara paine muunganidzwa wevashandi vanozivikanwa muindasitiri yavo, inovimbwa nevatengi vako nevezera rako, uye ndiani anogona kudzora nekusimudzira kusvika kwekushambadzira kwesangano rako. Sei usiri kuzvishandisa?
Kune zvekare vapeseri mukati meumwe wako network uye mutengi base vanogona kugovana yako yemagariro midhiya kushambadzira. Uri kutora vanhu ivavo futi?
Easy Advocacy: Yemahara Platform kubva kuAgorapulse
Ndave ndiri wenguva yakareba fan yekambani uye zvishandiso kubva Agorapulse. Nzvimbo yavo yemagariro inbox chikuva, mumaonero angu, ndiyo yakanakisa pamusika. Iyo kambani yakatanga yakazvimiririra-inobhadharwa mari, inoshamisa inoteerera kune maficha, inodhura-inoshanda, uye inopa inoyevedza interface apo vamiririri nemakambani vanogona kuongorora, kuyera, kutsikisa, uye kupindura kune yega yega media media chiteshi kubva kune imwechete mushandisi interface. Agorapulse anga ariwo mutengi wangu… uye ndinoramba ndiri mubatanidzwa wavo.
Agorapulse akaziva kuti paive nemukana wakanaka wevashandi uye vanokurudzira mikana yekutsigira kuparadzira meseji yavo, saka vakagadzira Nyore Kureverera, yemahara yemagariro midhiya yekukurudzira chikuva.
Zvimiro zveRinyore Advocacy
Kurumidza Campaign Set-Up - Mhanya yakarongeka, yakazara-yakazara rutsigiro mushandirapamwe mune isingasviki maminetsi gumi. Pinda maemail pane ako ekuparadzira runyorwa, teedzera iyo URL yezvaunoda kugovera uye wedzera tsananguro, uye tinya kutumira!
Ita Kugovana Zvemukati Zviri Nyore - Vashandi vako vanowana zvese zvavanoda kuti vagovane munzvimbo imwechete. Meseji yako inogona kupararira kune Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest kana kuburikidza neemail.
Ziva Kuti Zvako Zvemukati Zvakasvika Sei - Pakarepo ona macampaign ari kushanda uye kuwana akanyanya kudzvanywa nevashanyi. Ona kuti ndiani pane yako yekuparadzira runyorwa ari akabatanidzwa zvakanyanya uye anonunura akanyanya maonero! Kuve neanoonekwa bhodhi rinokurudzira vashandi kuti vawedzere mhedzisiro.
Wedzera Campaign yeAdvocacy
Ongorora Campaign yeAdvocacy
Govera Campaign Yako Yekutsigira
Wona yako Yekutsigira Campaign Mhedzisiro
Ichi hachizi chimwe chemahara chishandiso chakakandwa kunze pamusika, timu kuAgorapulse inoshandisa chishandiso kugovana zvinyorwa zvavo uye kukwidziridzwa nevashandi vavo uye yavo yekukurudzira network… kusanganisira ini! Semurevereri webasa ravo, ndinogona kukuvimbisa kuti zvinoita kuti hupenyu hwangu huve nyore sezvo mameseji ese uye zvinongedzo zvakanyorwa kare uye zvakamisikidzwa. Ini ndinogona kugadzira tudiki tweaks kuti ndigadzire iwo meseji - uye ndigovane iyo mukati memasekondi.
Kutanga Rwekutanga Rwekutsigira Campaign
Tags: nyore kutsigirayemahara yekumiririra chikuvakukurudzira kukurudzirashare social mediasocial media kukurudziramagariro enhau kugovana